Midlalo Ukutya Ukulahlekelwa ngumzimba Monodiettes Inyama
Ukutya kwezilwanyana, njengawo nawuphi na ukutya okudliwayo, uthembisa ukulahleka kwesisindo esiphuthumayo, akufanelekanga kuwo wonke umntu: kuyacetyiswa ukusebenzisa iprotheni eninzi. Ngaphandle kweprotheyini yokutya, akukho mveliso encinci, ngoko ke oku kutya akufanelekanga kwixesha lehlobo: lixesha eli xesha ngenxa yexesha leeholide kunomsebenzi owandileyo. Nangona kunjalo, akukho nto iqinisekileyo yokuba ukulahleka okunyanzelekileyo kunye nokuncedwa kwenyama yokutya kuya kuhamba ngaphandle kweengxaki. Ngoko, yintoni isiseko sokutya kwenyama, i-pros and cons.
Umntu ufuna ukutya okunokulinganisela kungekhona kuphela amaprotheni, kodwa kunye namafutha, i-carbohydrates, iivithamini. Ichaphazela kakhulu imetabolism ekungabikho kwanoma yiyiphi idilesi ebhaliweyo ekudleni. Iiprotheni zisetyenziswe ngumzimba ukuba zenze iiprotheni ezifunekayo ngexesha lokucoca kwazo zibe yi-amino acids. Ukususela kwiiprotheni zomzimba zixhonywe ngokuyinhloko yizintso. Amandla okugcina amandla omzimba ngamafutha, kunye nemithombo yamandla i-carbohydrates.
Umlinganiselo weeprotheyini kufuneka ulinganise: ukuba azinqongophala, ulusu luyabulala emzimbeni - luba lumile; izikhonkwane kunye nezinwele; ngenxa yokuphulwa komzimba, umntu uya kuba neengcingo. Kwaye, ngokugqithisileyo, i-proteins emzimbeni angakhokelela ekuphelelweni kwezintso, kuba izintso azikwazi ukujamelana nokuhoxiswa kwenani elikhulu leeprotheni kunye nemveliso yokuchithwa kwawo iwele egazini.
Xa kuninzi kwamaprotheni emzimbeni ongekho umthombo wamandla, oko kukuthi, kwi-carbohydrates, inkqubo yokufumana amandla avela kwiiprotheni. Kwaye nemveliso ye-metabolism kule nkqubo inetyhefu.
Izixhobo zokutya inyama.
Ngokungafani nokutya kwe-Kremlin, inyama ibonisa ubukho ekudleni kunye nemifuno, kwaye nayiphi na into. Ngoko ke, akuyingozi.
Inyama kufuneka idliwe i-fat fat and boiled, ngaphandle komhluzi. Kunokungathandabuzeki ukusebenzisa okuthosiweyo kwinyama yeoli yeoli, i-sausages kunye ne-sausages. Ulunge nje inyama ephekiweyo. Eminye inyama itshintshe ngokukodwa kunye namaqanda kunye nentlanzi.
Iingcambu zicetyiswa ukuba zisebenzise naluphi na ubungakanani, zombini oluqingqiweyo noludlulileyo olucwangcisiweyo - ukubilisa, ukuqhuma, ukuhamba. Ukususela ekudleni kufuneka kukhutshwe kuphela iidroti, iifatata kunye nommbila. Kwakhona kuyimfuneko ukususa ukutya okusanhlamvu, iswekile kunye neziphuzo ezinobisi, iziqhamo, nayiphi na imveliso yomgubo, iimveliso zobisi kunye notywala.
Ngomhla kubalulekile ukuba ungadli ngaphezu kwama-450 g weeprotheyini ukutya-inyama, amaqanda, intlanzi. Ityuwa inqweneleka ukuba ingabandakanywa ekudleni, ukuhambisa iziqholo, ezenziwe kwimibala enemibala kunye nejisi lemon. Ukutya kubangama-5-6 ngamaxesha, imifuno kunye nokutya kwamaprotheni, isidlo sokugqibela akufanele sibe ngaphaya kwe-8 ntambama. Imizuzu engama-30 emva kokutya - kungekudala - unako ukusela igrisi yemifuno yemifuno, amanzi amaminerali okanye i-tea engenasiphunga, ikhofi.
Ngokuncedwa kokutya ukutya kweentsuku ezili-10 ungaphonsa malunga neekhilomitha ezili-5 zobunzima. Kodwa ungasebenzisi kakubi inyama yokutya. Ukunyuka kwesisindo ngoncedo lwale ndlela yokutya kunomzuzwana omuhle ekubeni umzimba awukho kwindlala, kwaye ngokuqhubekayo, ngokutya okuqhelekileyo, akukho mfuneko yokuba "udle" ngenxa yokuba isisu sancitshiswe kwixabiso elincinci lokutya.
Ziziphi iimpawu kunye nokuchasene.
Iinkonzo. Ngokusetyenziswa okunengqiqo kwesi sondlo, unokuqinisa imisipha ngokuwenza i-gymnastics. Ngokudibanisa ngokufanelekileyo inyama kunye neentlanzi, unokuphumeza umphumo wokuqinisa amathambo omzimba, kuba intlanzi iqulethe i-calcium kunye ne-phosphorus eyimfuneko yomzimba, kwaye kulula ukugaya.
Umxhasi. Ukutya kwenyama kuphikisiwe:
abantu asebekhulile, kuba ngenxa yobudala beentso iprotheni ithathwa kakhulu;
naziphi na izifo zengqondo;
abantu abaselula ukuya kwiminyaka eyi-18, kuba imfuyo ekhulayo iphendula kakubi ukungabikho kokutya okunokulinganisela - ukuya kwizifo ze-endocrine system;
nezifo ezingapheliyo kunye nezifo ezingapheliyo - umzimba awukwazi ukuhlangabezana nemali enkulu yeprotheni.
Ngokusetyenziswa kwexesha elide lokudla kuphela inyama, umsebenzi wezintso unokukhubazeka kakhulu - ukufikelela kwonyango.
Isondlo sesisu sisenokubandezeleka kakhulu, ukuya kwi-dysbacteriosis. Oku kuchazwa ngokuphindaphindiweyo kweenkqubo zokubeka izibilini kumathumbu ngenxa yobunzima obunzima bokutya inyama. I-microflora ye-pathogenic ngokomzimba, eyakhiwe kwiinkqubo ezinjalo, imane ishiya indawo eqhelekileyo, kwaye ikhusela ukusetyenziswa kakuhle kweemveliso. Kwaye unyango lwe-dysbacteriosis - inkqubo eninzi kakhulu kunye neyobasebenzi. Njengomthetho, kulula ukufumana kunokunyanga emva koko.
Ekubeni amajoni ethu omzimba akhiwe kakhulu kwiiprotheni, ukutya inyama kukusetyenziswa kakuhle ngexesha lokunyuka kwamaqanda kunye nezifo zentsholongwane - oko kukuthi, ekwindla-ebusika.
Indlela yokunciphisa ngokukhawuleza umthamo wezintlu
Ukuhamba kwikhephu elingenasinenfo
Yintoni ebangela ukungabikho kwamafutha ekudleni
Iinguqu kumzimba ngexesha lokukhulelwa
Izicathulo zamadoda okwenene: izixazululo zesisombululo ekwindla ngo-2016
I-yoga yebantwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwiiveki ezisibhozo: ukulinganisela kunye nokuziphucula
INkosana uHarry kunye neCressida Bonas zibandakanya